Momba anay - Wuhu Radar Plastic Company Co., Ltd.
Wuhu Radar Company Plastika voafetra
tantara: Naorina tamin'ny taona 2010, Manokana amin'ny vokatra mifandraika amin'ny PLA 10 taona.
Toro lalana: Mifanaraka amin'ny natiora.
Service: Omeo ny vahaolana voajanahary voajanahary tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny indostria samihafa.
Strength: Teknolojia mandroso amin'ny vokatra mifandraika amin'ny PLA, traikefa matihanina amin'ny vokatra biodegradable.
Kolontsaina: Samy mankafy ny fahasambarana sy ny fahalalahana.
Hery ho an'ny vokatra
D.Warranty: manome 12 hatramin'ny 18 volana fiantohana ho an'ny vokatra rehetra izahay.
Sarimihetsika mihinjitra biodegradable, Eco Cling Wrap Sugar Wrap, Famonosana clod biodegradable, Kitapo fako tsy azo ovaina, Kitapo azo zezika, Kitapo fako azo zezika,